PressReader - Ilanga langeSonto: 2017-08-27 - AKE KUBHEKWE LELI GAMA "LABAMNYAMA"
AKE KUBHEKWE LELI GAMA "LABAMNYAMA"
Ilanga langeSonto - 2017-08-27 - Imibono -
MHLELI: Ngikhathazwa yileli gama elisetshenziswa ukuchaza thina ma-africa elithi ngesiNgisi singama-black. Leli gama kalingiphathi kahle ngoba nginenkolelo yokuthi ligqanyiswa ukuze lifihle abelungu ngokuthi bona babizwe ngokwezindawo lapho bephuma khona.
Kukhona nesizwe samandiya esibizwa ngokobuzwe baso uze ubone ukuthi bayazigqaja ngalokho ngoba ukubizwa kanjalo kubaxhumanisa nezimpande zabo. Ngaphambi kokuthi sithole ilungelo lokuvota, sibone ama-afrika azinze e-america ephoqa ukuba abizwe ngama-african Americans, okuwuphawu lokuthi umuntu uyathanda ukubizwa ngemvelaphi yakhe kodwa thina la kwelethu sijabulela ukubi- zwa ngabantu abamnyama.
Okwamanje ngeke ngazi ukuthi yiliphi igama esingabizwa ngalo libe kahle ngoba negama lezwe lethu liseyinkinga kwazise kakulona igama lezwe leli elithi, “South Africa.”
Sisazabalaza sasinenkolelo yokuthi sizosebenzisa elithi “Azania” kodwa kuyacaca ukuthi saqede savota kwathalaliswa okwegama nokunye okuningi esingakuthinta ngelinye ilanga. Nginxenxa osomlando bakithi babheke ukuthi ngabe sisahamba ngakho yini uma sisebenzisa leli gama esizichaza ngalo njengamanje ngoba kalichazi thina kwazise kasibamnyama kahle-hle. Bheki Khathi, EMONTCLAIR